“Haa Tahu Jennee Harree Qallee Tahuu Baanan Harree Ganne” Jedhan! |
Damee Boruu: Waxabajjii 10, 2019
Ijaarsi OPDO yaroo duraa TPLFiin kan bu’uramte booji’amoota Oromoo waraana Dargii keessa turaniin yoo tahu kaayyoon ishee Uummata Oromoo bakka buutee haala bittaa TPLF mijjeessuuf ture. Akeekni Uummata Oromoo dammaqisuu, ijaaruu fi hidhachiisanii akka of danda’ee hiree isaa murteefatu gochuu keessa hin jiru.Yaroo sanas ABO waan tureef ijaarsa Oromoof dhaabbate fakkeessanii Uummata Oromoo dogongorsuu fi burjaajjessun akka TPLFf bara baraan bitamu gochuun kaayyoo ishee hangafaa ture.
Booda keessa garuu ijoollee dardarri hojii argachuufis haa tahe ijaarsa OPDO jaalatanii keessa galuun saba isaanii irratti hammenya hiriyyaa hin qabne raawwachaa umurii isaanii kana guutuu jiratan. Keessatti warri nagaa eeguu fi basaasa keessatti ramdaamanii hojjechaa turan warri akka Dr. Warqinee Gabayoo, Obbo Lammaa Margarsaa fi Kononeel Abiyi dhiiga ilmaan Ormoo lakkoobsa hin qabne akka dangalaasaa turan hubachuun rakkisaa hin tahu. Warri qabeenya Oromiyaa saamaa fi saamisaa turan warri akka Abbaa Duulaa Gammadaa, Dr. Alamuu Simee, Obbo Girmaa Biruu fi Obbo Kumsaa Dammaqsaa har’a jireenya badhaadhaa akka jiraachaa jiran ni agarra.
Warra kana keesaa maqaa Oromoo of haa mogaasan malee gareen isaanii dhalootan akka Habashaa tahan ragaa dhugaatu jira. Rakkinni Habashaa irraa dhalachuu utuu hin taane Oromoo fakkaatanii dantaa Uummta Oromoo Habashaaf dabarsanii badhaasuu dha. Dalootan Oromoo tahanii warri haqa Uummata Oromoon daldalaa jiran warra dhalootan Habashaa tahan kanaa gadi cubbuu hojjetanii jiru jechuu miti. Walii gala namni Uummata Oromoo fi qabeenyaa Oromiyaa irratti yakka hojjete hunduu itti gaafatamuun dirqama taha.
Yaroo xiqqaa fi guddaan Oromoo harka wal qabatee qabsoo bilisummaa itti muddaa dhufe OPDOn qabsoo uummataa kana hoogganuuf waadaa seentee itti dabarte. Badii kana duraa darbeef ofii dhiifama gaafatee ofumaa dhiifama ofii laatte. Uummatni Oromoo tollee jedhee harka isaa maratee taa’ee ilaale. Hojiin OPDO garuu bulee oollee farra Oromoo kan tahe ifatti hojjechuu tahe argame. Dhugaa dubbachuuf kan darbe irraa waan baratte tokko hin jiru. Keessa dabrtee iyyuu qabsoo keenyaan as geenye jettee dhaadachuu eegalte. Uummata safuu fi qaanii hin beeknee salphoo akkasii takkaa iyyuu hin agarra. Yoo OPDOn of dagatee Uummatni Oromoo bareechee akka ishee beeku dagachuu hin qabdu.
Uummatni Oromoo bakka hundaa qe’ee isaa irraa akka buqqa’u godhame. Akeekni OPDO akka Uummatni Oromoo namni na jibe jedhee yaada bilisummaa jedhu dhiisee akka fincilu gochuuf ture. Uummatni Oromoo kan takkaa argamee hin beekne bakka hundatti akka dhumu gochuun tooftaa haaraa dha.
Hidhamtoonni siyaasaa hiikamaniiru jechaa Oromoonni kumaataman mana hidhaatti guuramaa jiru. Ilmaan Oromoo har’as adamsamaa fi ajjeefamaa jiru. Gabeenyi Oromoo saamamaa fi barbdeefamaa jira. Komandi Postiin Oromiyaa keessa diriiraa jira. Waraanni sanyii dugugaa Uummata oromoo irrai labsamee jira. Kan takka argamee hin beekne Uummatni Oromoo xiyyaaran tumuu fi summii kamikaalan boosa fi beeladani Oromiyaa akka Uummata Oromoo wajjin gubatu tahaa jira. WBOn ayyaan ilaalatootani kaampii waraanaa gale summii, dhukkubaa fi jeequmsa sammuun namummaa keessaa bahaa jira. Hooggani ABO Finfinnee jiru hidhamtoota mana hin baane(captives) goote dursisuudhaan WBO irraa adda kutee jirti.
Karaa biraa namoota Oromummaa isaanii hin waakkanne of keessaa calattee baaftee jirti. Warri akka Addisuu Argaa dhiqaaltoni Habashaa warra APD hojjetan achi darbanii miseena ABN(NaMa) utuu hin tahiin hin hafnetu Uummata Oromoof hojjechaan jira jedhee nu gowwomsuu yaala. Uummata Oromoo gowoomsuuf Siidaa Jeneraal Taadasaa Biruu Salaalee geessite dhaabdi. Gochii ku Ummata Oromoof arba Guddaa dha. Jeneral Taadasaa BIruu Abbaa Saboonummaa(Founder and Father of Modern Oromo Nationalism) ti. Siidaan isaa karaa irraa fagaatee mandara keessa dhokkatee hin dhaabbatu. Ijoolleen Abbaa Gadaa gaaffi tokko siidaa Miniliki buqqiftee kan Taadasaa Biruu handhura Oromiyyaa Finfinnee keessatti akka dhaabduuf hawwii koo ti. Akkuma kana sidaa Haayile Selaasee namicha Oromoo dha jedhan kan ijaaree buqqifnee kan Jeneraal Waaqoo Guutuu akka dhaabbatuuf mamii hin qabu.
OPDOn ayyaana bareedaa Uummatni Oromoo waggaa tokko oliif laateef dagatee Uummata Oromoo balleessuuf akeeka godhachuun dogongora gudhaa dha. Ammaan kana yaroon ishee harkatti gubatee jira. OPDOn dhaabba fakkeesaa fi shiraa waan (fake and fraudulent organization) taateef baduu qabdi. Haa tahu jennee OPDO dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turte utuu beeknuu ayyaana laatneef. Hin taane. Kana booda hidda ishee of keessaa buqifnee gaatuuf dirqamna. “Haa tahu Jennee harree qallee tahuu didan harre gannee”tahe jira.
Previous articleIbsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo: ‘Tokkummaa Oromoo diiguudhaan Oromiyaa bittimsine Xoophiyaa ijaarra’ jedhanii yaaduun funyoo ittiin of fannisan fo’achuudha!
Next articleOPDOn Godina Booranaatti maallaqa Abbotii Gadaati hirtee akka WBO balaaleffatan godhaa jirti